Gudbiyeyaasha Raadiyaha FM-ka ee lagu sameeyay Shiinaha - FMUSER
Soo-saare Qalab Raadiye Khabiir ah oo Bixinta Adduunka oo dhan
Khabiir maqal iyo muuqaal ah oo iibiya xalalka gudbinta, waxaanu nahay FMUSER Broadcast!
Baahinta FMUSER waa khabiir qalabka idaacada alaab-qeybiye iyo qalabka baahinta tooska ah saaraha. In ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo wax soo saar leh, waxaan u adeegnaa idaacadaha idaacadaha iyo istuudiyaha tooska ah ee qulqulka leh qalab tayo sare leh iyo xal buuxa oo furaha ah ee adduunka oo dhan.
Waxbadan Ka Baro →
Taageerada Farsamo ee Waqtiga-dhabta ah
Alaab-qeybiyaha adduunka oo dhan oo ka yimid Shiinaha
Markii ugu horeysay ee FMUSER? Bilow Safarkaaga!
Isku xirka STL
Anteenooyinka Baahinta FM-ka
Gudbiyayaasha TV-ga UHF&VHF
Anteenooyinka Baahinta TV-ga
Nidaamka Isku-dhafka RF
Quwadda sare ee RF dummy load
Filter RF Awood Sare
Qalabka Daawashada tooska ah ee IPTV
$La xidhiidh wixii intaa ka badan
La iibiyey: 8
La iibiyey: 3
La iibiyey: 78
La iibiyey: 14
La iibiyey: 9
La iibiyey: 11
$Fadlan nala soo xidhiidh
La iibiyey: 112
La iibiyey: 87
La iibiyey: 5
La iibiyey: 30
La iibiyey: 23
La iibiyey: 22
La iibiyey: 123
La iibiyey: 54
$Booqo wax badan
Iibi: Booqo wax badan
La iibiyey: 98
$ Nala Soo Xiriir
La iibiyey: 4
La iibiyey: 10
La iibiyey: 7
La iibiyey: 13
La iibiyey: 6
La iibiyey: 121
La iibiyey: 120
La iibiyey: 101
La iibiyey: 74
Wararkii ugu dambeeyay ee FMUSER
Waxaad ka heli kartaa macluumaadka warshadaha ugu dambeeyay halkan.
Maxay dadku dhahaan?
FMUSER waxay leedahay adeegyo iib ka hor iyo iibka ka dib. Markii ugu horreysay ee aan kala tashaday shaqaalaha iibinta FMUSER wax ku saabsan wax soo saarkooda raadiyaha FM, waxay si dulqaad leh iigu hageen sida loo doorto qalabka raadiyaha FM ee xirfadleyda ah ee igu habboon. Markii aan iibsaday Ka dib gudbiyaha 150W FM, waxay si dulqaad leh uga jawaabeen su'aalo adag oo kala duwan. Mahadsanid FMUSER!
Sababta aan u jeclahay in aan FMUSER ka iibsado alaabada raadiyaha FM waa in ay haystaan ​​badeecooyin kala duwan oo aad u badan. Waxaan u maleeyay inay tahay shirkad yar oo iibinaysa idaacadaha FM-ta oo kaliya, laakiin xitaa waxay iibiyeen qalabka codaynta ee baahinta tooska ah, taas oo ah mid ka mid ah hababka madadaalada ugu kulul iyo kuwa caadiga ah sannadahan, aad u fiican! Qiimuhuna waa mid aad u macquul ah, tayada sidoo kale waa wanaagsan tahay, oo rajeynaya dukaamaysiga soo socda!
Waxaan FMUSER ka soo iibsaday qalab istuudiya oo dhamaystiran. Way fiican tahay qiimuhuna waa mid la awoodi karo. Marka la barbar dhigo qalabka baahinta gudaha ee la midka ah, qalabka baahinta FMUSER waa mid aad u qanacsan, xitaa waxaan dhihi karaa tani waa mid ka mid ah dareenka wax iibsiga ee ugu wanaagsan abid. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad buuxiso foomka "taageerada farsamada" oo aad la xiriirto farsamayaqaankooda, ka dib waxaad xor ka noqon kartaa arrimaha mashiinka burburay, mahadsanid, FMUSER!
7 MAALMAHA si loo habeeyo xalka ugu wanaagsan ee tebinta raadiyaha.
Waa maxay sababta 7 MAALMOOD ay ugu wada filan yihiin?
Waxaan leenahay 4 FACTORIES RF ah iyo sidoo kale 20+ Khibrad Abuur ah oo leh 10+ SANO Khibrad u leh naqshadeynta iyo daboolida idaacadaha kuwaas oo had iyo jeer lahaan doona dhabarkaaga.
Hadda Weydii Xigasho!
Waxaan kuugu jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood.
Waxaanu ilaalinaynaa sirtaada - macluumaadkaaga khaaska ah waxa si adag u ilaalin doona FMUSER.